ကျနော်နှင့် ဆံနွယ် အညိုးအတေး – Grab Love Story
ကျနော်နှင့် ဆံနွယ် အညိုးအတေး
၆လပိုင်းကျောင်းများဖွင့်ပြီ ဖြစ်သဖြင့် ၁၀တန်းကျောင်းသားဘဝကို စတင်ဖြတ်သန်းရတော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် ကျနော်စိတ်လှုပ်ရှားနေတော့သည်. ကျောင်းအသစ်ပြောင်းလာရသဖြင့် ပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားနေမိသည်. စာသင်ခန်းထဲ ဝင်လိုက်သည်နှင့် အခန်းထဲတွင် ကျောင်းသားများပြည့်နေပြီဖြစ်သည်. ခုံတန်းသုံးတန်း ရှိသည်အနက် ဘေး ၂တန်းပြည့်သွားလေပြီ. အလယ်တစ်တန်းတွင် ရှေ့ဘက်တစ်ဝက်တွင် မိန်းကလေးများထိုင်ရ၍ နောက်တစ်ဝက်တွင်ယောက်ျားလေးများထိုင်ရလေသည်. ကျနော်လည်း ရှေ့က စရေလျှင် ၄တန်းမြောက်ခုံတွင် နေရာယူလိုက်လေသည်. ကျောင်းအသစ် နေရာအသစ် သူငယ်ချင်းအသစ်များနှင့် တွေ့နေသဖြင့် အကဲခတ်စပ်စုနေမိသည်. သည်လိုနှင့် ကျောင်းတတ်ချိန်ပင် နီးလာတော့သည်. ထိုအချိန်တွင် စာသင်ခန်းပေါက်ဝတွင် အဖြူအစိမ်းလေးဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အနိမ့်အမြင့် အတတ်အကျ အချိုးညီညီ ရင်မို့မို့ နှင့် ဂစ်တာရှိတ်လေးသဖွယ် ထဘီအစိမ်းအောက်တင်းပြည့်နေသော တင်ပါးလုံးလုံးလေးနှင့် ကောင်မလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်လေသည်.ကျနော်လည်း မြင်မြင်ချင်း စွဲလမ်းမိသွားလေသည်. စွဲလမ်းမိတာကတော့ သူမ ခန္ဓာကိုယ်ထက် သူမရဲ့ ဆံနွယ်တွေပင် ဖြစ်လေသည်. အများနှင့်မတူ တမူထူးခြားနေသည်က သူ့မရဲ့ဆံနွယ်တွေက အညိုရင့်ရောင်သန်းနေခြင်း ပင်ဖြစ်သည်. တင်ပါးဝက်ခန့်ထိရှည်လျား ဖြောင့်စင်းနေသော ဆံနွယ်ရှည်တွေကို ပန်းနုရောင်ခေါင်းစည်းကြိုးလေးဖြင့် ခပ်မြင့်မြင့်စည်းထားလေသည်. ဆံပင်တွေကို ကြိုက်နှစ်သက်သူ ကျနော့်အဖို့ စည်းနှောင်ထားတဲ့ ဆံလုံးကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် ဘယ်လောက်ထူထဲ သန်စွမ်းသည်ကို ခန့်မှန်းလို့ရသည်.
ကြွကြွရွရွလေး လမ်းလျှောက်လာကာ မထင်မှတ်ထားပဲ ကျနော့်ရဲ့ ရှေ့တန်းတွင် ဝင်ထိုင်လိုက်သောအခါ ကျနော်ရင်တွေ တထိတ်ထိတ် ခုန်နေမိတော့သည်. လေတချက်အဝေ့တွင် သူမဆံနွယ်တွေက ရှန်ပူနံ့သင်းသင်းလေးက ကျနော်ရဲ့ စိတ်အာရုံတွေကို ဖမ်းစားပစ်လိုက်တော့သည်. ဆံနွယ်တွေမွှေးရနံ့ကြောင့် ညီတော်မောင်ကလည်း အငြိမ်မနေတော့ပေ. တော်သေးသည်… အတွင်းခံဝတ်လာပေလို့ပဲ မဟုတ်ရင် အရှက်တွေ ဗြန်းဗြန်းကွဲတော့မှာ အမှန်ပင် ဖြစ်သည်.
စာသင်ချိန်ရောက်သည် အထိ ကျနော်ရဲ့အချိန်အများစုက သူမရဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေပေါ်တွင်သာ အာရုံရောက်နေလေသည်. ခေါင်းအရင်းမှ စ၍ ဆံပင်အဖျားထိ တညီထဲဖြောင့်စဉ်းနေသည်ကို ကြည့်ချင်းဖြင့် ပင်ကိုဆံပင်အဖြောင့်မှန်းကျနော် သိလိုက်လေသည်. ကျနော်လည်း သူမကိုမိတ်ဆက်လိုက်လေသည်.
“ငါ့နာမည်က ကိုလင်းပါ ဒီနှစ်မှ ဒီကျောင်းကိုပြောင်းတာ. နင့်နာမည်ကရော?”ဟုမေးလိုက်သောအခါ သူမကျနော်ဘက်လှည့်လာပြီး ပြုံးပြကာ
“ငါ့နာမည်က အိဖြူပါ. ငါလည်းအခုမှ ဒီကျောင်းကိုရောက်တာ”
ကျနော်လည်းပျော်သွားပြီး “ဟုတ်လား ဒါဆို ငါတို့သူငယ်ချင်းလုပ်ကြရအောင်. အသစ်အသစ်ချင်းဆိုတော့ပိုကောင်းတာပေါ့.မသိတာရှိရင်လည်းမေးနော်”
“အင်းအင်း”သူမ ပြုံးပြကာခေါင်းညိမ့်ပြသည်. ကျနော်လည်း လူချင်းရင်းနှီးပြီဖြစ်သောကြောင့် အခွင့်အရေးရလျှင် သူမရဲ့ဆံပင်တွေ ကိုင်ကြည့်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်.
သည်လိုနဲ့ တနေ့ကျတော့ မိုးတွေအရမ်းသည်းနေတော့သည်. ကျနော်ကျောင်းကို ခပ်စောစောသာ ထွက်လာခဲ့လာသည်. အတန်းထဲရောက်တော့ မည်သူမျှမရှိသေးပေ. မိုးသံတွေသာ ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေတော့သည်. ထိုအချိန်တွင် အခန်းဝတွင် လူရိပ်တွေ့၍လှမ်းကြည့်လိုက်သောအခါ အိဖြူဖြစ်နေလေသည်. ဒီနေ့တော့ သူမ ဆံပင်တွေမစည်းထားသည့်အပြင် မိုးရေစိုထားသောကြောင့် ကျောလယ်လောက်ကစ၍ ရွဲစိုနေလေသည်. ကျနော်လည်း
” အိဖြူ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ. မိုးတွေရွာနေတာကို အစောကြီးလာတာလား. ဆံပင်တွေလည်းရွဲလို့” ဟုမေးလိုက်သည်.
သူမက “အင်းဟုတ်တယ်. ဒီနေ့စောစော နိုးတာနဲ့ ခေါင်းလျှော်ပြီး ထွက်လာတာ မိုးကလည်းရွာနေတာလည်း ဆံပင်မစည်းလာတာ ကျောင်းနားရောက်မှ မိုးပိုသည်းပြီး ရွဲကုန်တာ” ဟု မျက်နှာမဲ့ကာ ပြန်ပြောရင်း ကျနော်ဆီလျှောက်လာလေသည်. အနားအမရောက်မှီမှာပင် သူမရဲ့ ဆံနွယ်တွေမှ ရှန်ပူနံ့တွေ ကျနော်ရနေလေပြီ. ဒီနေ့တော့ ကျနော်ကံဆိုးတာလား မသိ အတွင်းခံဝတ်မလာခဲ့ချေ. အောက်က ညီလေးက ငေါက်ခနဲ ထထောင်နေပြီ.
“ဆံပင်ရေစိုကြီးနဲ့ နင်ဖျားတော့မှာပဲ. စိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင် နင့်ဆံပင်တွေကို ငါရေခြောက်အောင်လုပ်ပေးမယ်လေ” ဟု မေးလိုက်လေသည်.
“ရပါတယ်. အိမ်မှာလည်းနေနေကြပါ. ဘာမှမဖြစ်လောက်ပါဘူး”ဟု လှလှပပ ပြန်ငြင်းလေသည်. ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း
“အိမ်မှာက နေ့ခင်းဘက်လေ အခုမှ မနက်ပိုင်း ပြီးတော့ မိုးကလည်းအေးစိမ့်နေတာ. နင့်ဆံပင်ကလည်းတော်တော် စိုနေတာ. ငါ့ကိုအားမနာပါနဲ့ ရပါတယ် ” တွန်းတွန်းတိုက်တိုက် ပြောလိုက်တဲ့အခါ
“အာ့ဆိုလည်း လုပ်ပေး. ဖြည်းဖြည်းကိုင်နော် ဆံပင်ကို”ဟု ဆိုကာ ကျောဘက်လှည့်ပေးလေသည်.
ကျနော်လည်း” ဒီဘက်ခုံကဆို အဆင်မပြေဘူးဟ. နင့်ခုံကို ငါလာခဲ့မယ်”ဆိုပြီး ညီတော်မောင် အတင်းဖိနှိပ်ကာ သူမခုံတန်းဆီကို ဝင်ထိုင်လိုက်လေသည်. ထို့နောက် အိဖြူရဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း ကိုင်လိုက်တော့အခါ ကျနော့်ဘဝမှာ တခါမှမခံစားဖူးတဲ့ ပျော့ပျောင်းနူးညံ့လွန်းတဲ့ ခံစားမှုမျိုးကို ပထမဆုံးအကြိမ် ထိတွေ့မိချင်းဖြစ်သည်. ခေါင်းလျှော်ပြီးစဆိုတော့ ပုံမှန်ထက် ရှန်ပူနံတွေ တသင်းသင်းဖြစ်နေတော့သည်. အိဖြူရဲ့ဆံနွယ်တွေရဲ့ ညှို့အားကြောင့် ကျနော့် ညီလေးလည်း နောက်တကြိမ် ငေါက်ခနဲ ထလာကာ အရည်ကြည်များပင် စို့သွားလေသည်. ဆံပင်ရှည်တွေထဲကို လက်ချောင်းတွေထည့်လျိုပြီး ဖြည်းဖြည်းချင်း ဆွဲယူဖီးချပေးနေရင်း “အိဖြူ…နင့်ဆံပင်တွေက ပျော့အိနေတာပဲနော်. ပြီးတော့ လက်နဲ့ဖီးတာနဲ့ကို ဖြောင့်စင်းသွားတာပဲ.ထူလည်းတော်တော်ထူတာပဲ. ဖြောင့်ထားတာလား နင့်ဆံပင်က”ဟု မသိသလိုစကားစမေးလိုက်လေသည်.
“ဘယ်ကသာဟယ်… မဖြောင့်ပါဘူး. ပင်ကိုယ်ဖြောင့်တာ. ပျော့နေတာကတော့ ငါကသေချာထိန်းသိမ်းတယ်လေ. အာ့ကြောင့် အရမ်းလှနေတာ ဟိဟိ”ဆိုပြီး ရယ်ကာ သူမဆံပင်တွေ အပေါ်ဂုဏ်ယူစွာနဲ့ပြောလေသည်.ကျနော်လည်း ဆက်ပြီး
“ဒါဆို ဆေးဆိုးထားတယ်တော့လုပ်လိုက်. နင့်ဆံပင်က သူများတွေလို အမဲရောင်လည်းမဟုတ်ဘူး. အညိုရင့်ရောက်လိုလို ဘာလိုလိုနဲ့”ဟု ထပ်မေးလိုက်သောအခါ “အမလေး… ဆေးဆိုးရင် ဒီလိုထူထဲနေပါ့မလား. အရောင်ကလည်း ပင်ကိုအဲ့လို ညိုတိုတို ထွက်နေတာ ငါလည်းမပြောပြတတ်ဘူး. နင်မှမဟုတ်ဘူး တွေ့တဲ့လူတိုင်းအဲ့လိုမေးမေးနေတာ. ငါလည်းမရှင်းပြတတ်တော့ဘူး” ဟု ပြန်ပြောလေသည်.
“နင်က ကံကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးပဲ. နင့်ဆံပင်လိုမျိုး ငါတခါမှ မတွေ့ဖူးဘူး. ဟိုဟာလေ နင်ဇတ်ညောင်းရင် ငါ ဇတ်ကြောဆွဲပေးမယ်”ဟု ကျနော်လည်း အကြံနဲ့ပြောလိုက်လေသည်.
” အေး.အတော်ပဲ ငါလည်း မနက်အစောကြီးထပြီး စာလုပ်နေတာ ညောင်းနေပြီ. ဒီလိုကျတော့ ငါသူငယ်ချင်းက အားကိုးရသားပဲ” ဟု ကျနော်ဆင်တဲ့ဂွင်ထဲ တည့်တည့်တိုးဝင်လာတော့သည်.
ကျနော်လည်း အချိန်မဆိုင်းတော့ပဲ သူမဆံနွယ်တွေအကုန်လုံးကို ကျနော်ပေါင်ပေါ်ယူတင်လိုက်ပြီ ဇက်ကြောကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနှိပ်ပေးလိုက်သည်. မိုးအေးနေသည့်အချိန်နှင့် အိပ်ရေးမဝသည့် အရှိန်ကြောင့် မှေးခနဲ ခုံပေါ်လက်တင်ပြီး အိပ်ပျော်သွားလေသည်.
ကျနော်လည်း သူမအိပ်ပျော်သွားသည်ကို သေချာအောက် ပခုံးကိုတချက်လှုပ်လိုက်သည်. လုံးဝမနိုးတော့တာသေချာ၍ ကျနော်ရဲ့ လုပ်ငန်းစရန် ပြင်ဆင်လိုက်လေသည်……
မိုးသံတွေက ပိုသာကျယ်လောင်လေသည်. ကျနော်လည်း အိဖြူအိပ်နေတဲ့ခုံက ထလိုက်ပြီး အခန်းဝကိုထွက်ပြီး အခြေအနေထွက်ကြည့်လိုက်သည်. မိုးတွေသာ သဲကြီးမကြီးရွာနေပြီး မည်သူမျှမတွေ့ရပေ. ခုံတန်းဆီပြန်လျှောက်လာသည်အထိ အိဖြူတုပ်တုပ်မျှ မလှုပ်သေးပေ. ကျနော်လည်း ခုံကိုခွထိုင်လိုက်ပြီ. ပုဆိုးကိုခပ်ပြေပြေချွတ်လိုက်ကာ အိဖြူရဲ့ ဖြောင့်စင်းပြောင်တင်းနေတဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေကိုယူပြီး လီးကိုပတ်လိုက်သည်. ထိုအခိုက်အတန့်က ကျနော့်ဘဝမှာ တစ်သက်လုံး မေ့မရတဲ့ အခိုက်တန့်တခုလို့ပြောလျှင် မမှားပေ. လျှော်ပြီးစ ဆံပင်ဖြစ်သည့်အပြင် အမြဲပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားသောကြောင့် ပိုးသားလေးကဲ့သို့ နူးညံ့ပျော့အိနေတဲ့ ခံစားမှုအထိအတွေ့ကိုရလိုက်လေသည်. ဆံပင်ရဲ့ စွဲဆောင်မှုကြောင့် ကျနော့်လီးလည်း အသားကုန်တောင်ကာ အရည်ကြည်များ တစိမ့်စိမ့်ထွက်လာတော့သည်. ကျနော်ကျနော်လီးကိုနဲနဲ ထပ်ပတ်လိုက်ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ရင်း ဖီးယူလိုက်တော့သည်. ခံစားမှုက ကောင်းလွန်းသည့်အတွက် မ
ည်မျှ ကြာသွားသည်ကိုမသိ မိုးပင်တိတ်သွားပြီး ကျနော်သိလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အိဖြူရဲ့ဆံပင်ရှည်တွေပေါ်တွင် သုတ်ရည်များ ပြန့်ကျဲနေလေပြီ. ကျနော်လည်း ခေါင်းနပမ်းကြီးသွားလေတော့သည်.
ထိုအချိန်တွင် ကျနော့်အတွက်ကံကောင်းမှုက ကံဆိုးမှု ရုတ်ချည်းပြောင်းသွားသည်. အိဖြူရုတ်တရက်နိုးလာပြီး သူမရဲ့ဆံပင်တွေဆွဲယူလိုက်တဲ့အခါ ကျနော့်ရဲ့ သုတ်ရည်တွေနဲ့ လုံးထွေးသွားပြီး သူ့လက်ကို ပေကျံသွားတော့လေသည်. ရုတ်တရက်အဖြစ်အပျက်ကြောင့် ကျနော်လည်း ဘာမှလုပ်ချိန်မရသည့်အပြင် သူမ ကျနော်ဘက်လှည့်လာသောအခါ ကျနော့်မှာ ပုဆိုးပင်ပြင်မဝတ်နိုင်သေးပဲ လီးတန်းလန်းဖြင့် ဖြစ်လေသည်. အမြပြုံးနေသည့် အိဖြူ မျက်နှာတွင် အပြုံးများကင်းမဲ့သွားပြီး ကျနော်အားဒေါသမီးဟုန်းဟုန်းတောက်နေတဲ့ အကြည့်တွေနဲ့ ကြည့်လိုက်ပြီး မပြောမဆိုနဲ့ ပါးရိုက်လိုက်လေသည်. ကျနော်လည်း ပါးတခုလုံး ပူထူသွားပြီး ကိုယ့်အပြစ်နဲ့ ကိုယ်မို့ ဘာမှပြောမထွက်ခဲ့ပေ. အိဖြူ မျက်ရည်တွေလှိမ့်ဆင်းလာပြီး
“လူယုတ်မာ. နင်ငါ့ဆံပင်တွေကို ဘာလုပ်နေတာလဲ. ဟမ်. နင်အဲ့လောက်ဖြစ်နေရင် တခြားကောင်မဆံပင်သွားလုပ်. ငါ့ဆံပင်ကို နင်လိုကောင်ကများ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် လုပ်ရက်တယ်. တော်တော်မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်”ဟု ဆိုပြီး ကျန်ပါးတဖက်ကို ထပ်ရိုက်လေသည်. ဒီတခါ ပိုနာသည်. ပါး၂ဖက်လုံးပူထူသွားပြီး ရင့်ရင့်သီးသီးအပြောခံရသဖြင့် ကျနော်လည်း ဒေါသနဲနဲထွက်လာသည်. သူမကဆက်ပြီးတော့
“နင်အဲ့လောက်ယားနေရင် နင့်မအေ နင့်အစ်မဟာသွားလုပ်ချေ. ငါ့ကို ဘယ်လိုအတန်းအစားအောက်မေ့နေလဲ. နင့်ကိုသူငယ်ချင်းမို့ယုံခဲ့တာ. နင်ကအောက်တန်းစားပဲ”ဆိုပြီး မတ်တပ်ရပ်ကာ ကျနော်အား လက်ညှိုးထိုးကာပြောဆိုတော့လေသည်. ကျနော်လည်း ဘယ်လိုဖြစ်သွားလည်းမသိ အမေနဲ့ကိုင်အပြောခံကတော့ လူက ပိုဒေါသထွက်သွားပြီး ပုဆိုးပြင်ဝတ်ကာ အိဖြူနည်းတူ မတ်တပ်ထရပ်လိုက်ပြီး အိဖြူကိုစေ့စေ့ကြည့်လိုက်သည်. ထို့နောက် “အေး…နင်ငါ့ကိုစော်ကားတယ်. ကြည့်နေလိုက်. နင့်ဆံပင်ရော နင့်ကိုရော ငါပိုင်စေရမယ်. နင်စောင့်ကြည့်လိုက်. တနေ့ နင့်ဆံပင်ကို ငါ့စိတ်ကြိုက်လုပ်ပြမယ်” ကြိမ်းဝါးလိုက်သည်. သူမလည်း ” စိတ်ချ နင်ထင်သလို ဘယ်တော့ဖြစ်မလာဘူး. ငါ့ဆံပင်ကို ဒီတသက်နင် နင်ထပ်မထိစေရဘူး.အကုန်ညှပ်ပစ်မယ်. ကြည့်နေ “ဆိုပြီး သုတ်ရည်တွေ ပေနေတဲ့ ဆံပင်တွေကိုကျော်ဘက်ချကာ ချာခနဲလှည့်ပြီး အခန်းထဲက ထွက်သွားလေသည်. သုတ်ရည်တွေပေနေတာတောင် ဆံပင်တွေက ရတဲ့ ရှန်ပူနံ့က သင်းနေတုန်းပေ. ကျနော်လည်း အခန်းပြင်ထွက်ရင် သူမနောက်လိုက်ရန်ပြင်လိုက်သောအခါ သူငယ်ချင်းများက ဝင်လာသောကြောင့် အခြေအနေကိုအကဲ ခတ်ပြီး လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီး
“အိဖြူရာ နင့်ဆံပင်တွေငါပိုင်စေရမယ်. ဘယ်အချိန်ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ နင့်ကိုရအောင်ယူပြမယ်”
ဟု စိတ်ထဲက ကြိမ်းဝါးမိနေသည်. သို့သော် သူမက တစက်ကလေးမှ လှည့်မကြည့် ဆံပင်ရှည်တွေကိုကျော်ပေါ် ဖြန့်ခင်းကာ ကျောင်းဝင်းထဲက ထွက်သွားတော့လေသည်.
နောက်တနေ့ ကျောင်းတတ်ခေါင်းလောင်းထိုးသည်အထိ အိဖြူ ပြန်ရောက် မလာသေးပေ. ကျနော်လည်း နဲနဲစိတ်ပူလာပြီ. သူမအိမ်လည်း ကျနော်မသိပေ. ဒီလိုနဲ့ တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ သူမ အမေရောက်လာပြီး ကျောင်းထွက်လက်မှတ် လာယူသွားလေတော့သည်. ကျနော်လည်း အဲ့အချိန်ရောက်မှ လုပ်ခဲ့မိတာတွေအတွက် နောင်တကြီးစွာရနေတော့လေသည်. သူမဆံပင်တွေကို ညှပ်ပစ်လိုက်မှာကိုပဲ ပိုစိုးရိမ်မိနေသည်. ထိုနေ့မှ စ၍ အိဖြူရဲ့ အရိပ်အယောင် ကျနော်လုံးဝ ရှာမတွေ့ခဲ့တော့ချေ. အလှဆုံး ဆံပင်ပိုင်ရှင်လေးနဲ့ နီးစပ်ခွင့်ရသော်လည်း ကျနော့်ရဲ့ လုပ်ရပ်ကြောင့် ဝေးကွာခဲ့တော့လေသည်. သည်လိုနဲ့ ကျနော်လည်း ဆယ်တန်းအောင် တက္ကသိုလ်ရောက်သည်အထိ ဆံပင်အရှည်တွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေ တွေ့သော်လည်း အိဖြူဆံပင်လောက် စိတ်ထဲ မတိုးဝင်နိုင်ခဲ့ပေ. တဖြည်းဖြည်း တက္ကသိုလ်လည်း ပြီး ဘွဲ့လည်း ရပြီ ဖြစ်၍ အလုပ်လျှောက်ရင် စဉ်းစားရတော့လေသည်. ကျနော်ယူထားသောဘွဲ့ တတ်ထားသော သင်တန်းများနှင့် အတူ ဆံပင်ရှည်တွေ စိတ်ဝင်စားသူပီပီ ခေါင်းလျှော်ရည် ကုမ္ပဏီတခုတွင် အလုပ်လျှောက်လိုက်လေသည်. ကံကောင်းထောက်မစွာဖြင့် ဖြန့်ဖြူးရေး မန်နေဂျာရာထူး ရခဲ့သည်.
အလုပ်ပထမဆုံး စဝင်သည့်နေ့တွင်ပင် ဆံပင်ရှည်ရှည် ကောင်မလေးတွေနှင့်တွေ့နေရသဖြင့် ပျော်နေမိတော့သည်. ထိုအချိန်တွင်လုံးဝမထင်မှတ်ထားပဲ ငယ်ဘဝကို ပြန်အမှတ်ရစေမဲ့ အခိုက်အတန့်တခုဖြစ်လာတော့လေသည်…..
ရုံးထဲက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ မိတ်ဆက်နေရင်း ရုံးပေါက်ဝတွင် လူရိပ်မြင်လိုက်သဖြင့် ကျနော်အမှတ်တမဲ့ တချက်လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်. မျက်နှာပြန်လွှဲပြီး ချက်ချင်းပင် အသေအချာ ကျနော်ပြန်ကြည့်ရတော့သည်. ရုံးအဝင်အဝ စားပွဲခုံတွင် ခန္ဓာကိုယ်လေးအား ကိုင်းပြီး လက်မှတ်ထိုးနေသည့် မိန်းမပျိုတဦးပင်ဖြစ်သည်. ထူးခြားနေသည်မှာ သူမရဲ့ဆံနွယ်ရှည်ကြီးပင်ဖြစ်သည်. ခန္ဓာကိုယ်လေးကိုင်းထားသဖြင့် ကျောပေါ်မှ တဆင့်ပခုံး ထိုမှတဆင့် အရှေ့ဘက်ကို အညိုရင့်ရောင် ဖြောင့်စင်းနေတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီး လှပစွာ ပြန့်ကျနေတော့သည်. ထိုဆံပင်ပိုင်ရှင်မျိုးက အလွန်ရှားပါးလှသည်. ကျနော်စိတ်ထဲတွင် အိဖြူများဖြစ်နေမလားဆိုပြီး ဆုတောင်းနေမိတယ်. ကျနော့်စိတ်အာရုံတွေအားလုံး ထိုမိန်းမပျိုထံရောက်သွားလေသည်. လက်မှတ်ထိုးပြီး ခန္ဓာကိုယ်လေးပြန်မတ်ကာ ကျနော်ရှိရာသို့ သူမရဲ့ဆံနွယ်ရှည်တွေကို လေထဲတွင်ဝဲကနဲဖြစ်အောင် နောက်ကျောသို့ အသာယာပို့လိုက်သည် မြင်လိုက်ရပြီး ကျနော်ရဲ့နှလုံးခုန်သံတွင် ရပ်မတတ်ဖြစ်သွားရတော့သည်. အိဖြူမှ အိဖြူ အစစ် လုံးဝ မမှားနိုင်ပေ. မြန်မာဆန်ဆန်လေးရင်စေ့အင်္ကျီလေး ဝတ်ထားတဲ့အခါ မို့မောက်နေတဲ့ ရွှေရင်အစုံက ထင်းနေပြီး ခါးလေးသေးသွယ်ကာ တင်လုံးလေးက စွင့်ကားနေပြီး လှပလွန်းတဲ့ အညိုရောင်ဆံနွယ်ရှည်တွေက ခြေသလုံးကျော်ထိပင် လှပဖြောင့်စင်းနေကာ လှချင်တိုင်းလှပနေတော့လေသည်. ကျနော့်ဆီသို့ တလှမ်းချင်း လျှောက်လာပြီး အနားရောက်မှ ကျနော့်အား မော့ကြည့်ကာ လက်လှမ်းလိုက်လေသည်. ရုတ်တရက် ကျနော်လည်း ကျောင်းတုန်းပါးရိုက်ခံထားသည့်အတွက် လန့်သွားပြီး နောက်သို့ တချက်တွန့်သွားလေသည်. အဲ့အချိန်တွင် အိဖြူမှ
“မင်္ဂလာပါ ဆရာ. တွေ့ရတာ ဝမ်းသာပါတယ်ဆရာ. ကျမနာမည်က အိဖြူပါ” ဆိုပြီး နှုတ်ခွန်းဆက်လေသည်. ထိုအခါမှ ကျနော်လည်း သတိပြန်ဝင်ပြီး သူမရဲ့အကြည့်မျက်ဝန်းတွေထဲ နစ်မျောကာ
“Aww. မင်္ဂလာပါ ညီမ”ဟု တလုံးတည်းပြန်ပြောနိုင်လိုက်သည်. သူမကဆက်ပြီး
“ဟုတ်ကဲ့. ဆရာက ဒီဌာနမှာ ဖြန်းဖြူးရေး မန်နေဂျာအသစ်လို့ bossက ပြောထားလို့သိရပါတယ်. ကျမက ဆရာ့လက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ရမယ့် ဆံပင်ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင်ပါ. ဆရာမသိသေးတာတွေ အတွက် ရှင်းပြပေးဖို့ ကျမ တာဝန်ယူထားရပါတယ်”
ဟုဆိုကာ ရှင်းပြလေသည်.ကြည့်ရတာ သူမကျနော့်ကို မမှတ်မိပေ. မှတ်မိလျှင်ကျနော့်ကို ယုခုလိုဆက်ဆံမည်မဟုတ်ပေ. ရှင်းပြပြီးနောက် သူမဆံနွယ်တွေ ဝေ့ကာလှည့်ထွက်သွားလေသည်. ကျောင်းသားဘဝက ရခဲ့တဲ့ ရှမ်ပူနံ့ကို တဖန်ပြန်လည်ခံစားလိုက်ရပြီး အောက်ကညီတော်မောင်ကထောင်ချင်သလို့ဖြစ်လာတော့သည်. အိဖြူရဲ့ လှပပျော့ပျောင်းလွန်းတဲ့ ဆံပင်ရှည်တွေ ကျောပြင်ပေါ်တလွင့်လွင့်နှင့်ပြန့်ကာ သူမအလုပ်လုပ်ရာစားပွဲဆီသို့ လမ်းလျှောက်သွားသည်မြင်လိုက်ပြီး ဒီတခါတော့ ကျနော့်ရဲ့လီးတကယ်ပင် တောင်နေတော့သည်. လီးတောင်ပြီး အရည်ကြည်များထွက်လာသည်ကိုခံစားမိကာ နေရထိုင်ရခက်ပြီး ရုံးခန်းအတွင်းသို့ အမြန်ဝင်လာခဲ့လိုက်သည်.
“ညီလေးရေ. အိဖြူဆိုတဲ့ကောင်မလေးက ဒီမှာ အလုပ်လုပ်နေတာကြာပြီလား”
“Aww. ဟိုဆံပင်အရှည်ကြီးနဲ့ အစ်မကိုပြောတာလားဆရာ.. နဲနဲတော့ကြာပြီ. ၆လလောက်ရှိပြီထင်တယ်. ဘာလဲ ဆရာစိတ်ဝင်စားသွားပြီမလား. ကျနော်သိနေပါတယ်ဗျာ. အဲ့အစ်မကိုမြင်ကတည်းက ဆရာမျက်လုံးတွေ ကျွတ်မတတ်ကြည့်နေတာ. ဒါလည်းဆရာအပြစ် မဟုတ်ပါဘူးလေ. အဲ့အစ်မကိုက လှလွန်းတာ ဆံပင်ကြီးကလည်း အရမ်းလှတယ်”ဟု ရုံးအကူလေးက ကျနော့်က မျက်စပစ်ကာ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ မေးလေသည်.
“အာ မင်းကလည်းကွာ. ကိုယ့်ဆရာကို အခုမှရောက်တာ အခုပဲ စဖောက်နေတော့တာပဲ. မင်းကတော့နာတော့မယ်. အမှန်တိုင်းပြောရရင် အမှန်အကန် စိတ်ဝင်စားတာကွ” ရှက်ရှက်နဲ့ ပြန်ပြောလိုက်သည်.
ရုံးအကူလေးမှ ” ဟာ ဆရာစိတ်လျော့. အဲ့တာ boss ချိန်ထားတဲ့ ငှက်မလေးဗျ. အင်တာဗျူးကတည်းက ဆံပင်အရှည်ကြီးနဲ့ လာတာ bossလည်း ဆရာလိုပဲ မျက်စိကျွတ်မတတ်ကြည့်ပြီး ချက်ချင်း အလုပ်ခန့်ထားတာ. ပြီးတော့ ဒီဌာနကို bossလာရင် အိဖြူ အိဖြူဆိုတာချည်းပဲ” ဟု ထိတ်ထိတ်ပြာပြာနှင့် ကျနော့်ရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို လှမ်းပိတ်လေသည်.
“ဟာ…. အဲ့လိုလား. ငါ သွားပါပြီကွာ… အေးအေးထားတော့ကွာ မင်းလုပ်စရာရှိတာဆက်လုပ် “ဆိုပြီး ပြောကာ ခုံမှာထိုင်လိုက်သည်.
“အိဖြူရာ တွေ့မယ့်တွေ့တော့လည်း နင့်ကိုချိန်ထားတဲ့ ဘောစိက ရှိနေတာပဲ. နင်နဲ့ငါ့ကြားမှာ ရှင်းစရာတွေရှိသေးတယ်. ငါ့ပါးကိုရိုက်ထားတဲ့ နင့်ကိုငါမမေ့ဘူး အိဖြူ. အဲ့တော့လုပ်စရာ နည်းလမ်းတခုပဲ ရှိတယ်. နင့်ကိုငါပဲ ပိုင်စေရမယ်. နင်ဆံပင်ကို ဘယ်ကောင်မှ အထိမခံဘူး” ဟု ယခင်ကအညိုးအတေးကို ပြန်တွေးမိပြီး အကြံထုတ်တော့သည်.
၂ပတ်လောက်ကြာတော့ bossရောက်လာပြီး “ညီ အဆင်ပြေရဲ့လား အလုပ်လုပ်ရတာ. လိုအပ်တာရှိရင် အကို့ကိုပြောနော်. အိဖြူရော ညီ့ကိုရှင်းပြရဲ့လား” ကျနော့်ကိုလာနှုတ်ဆက်ရင်း အလုပ်အကြောင်းမေးသည်. ထို့နောက်အိဖြူဆီ သွားပြီး စကားပြောနေရင်း အိဖြူရဲ့ ဆံပင်တွေကို ကိုင်ကြည့်နေသည်. သူမဆံပင်ကို ကိုင်တာကိုမကြိုက်တဲ့ အိဖြူက bossကိုင်တဲ့ အခါ ပြုံးရီနေသည် ကျနော်မြင်လိုက်ပြီး ဒေါသတွေထွက်လာတော့သည်. အိဖြူ ဆံပင်ကို ထိနေတဲ့လူကို ဆွဲထိုးချင်သော်လည်း bossဖြစ်နေသောကြောင့် လုပ်ချင်တိုင်လုပ်မရ. ထို့ကြောင့် ကျနော် တချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီး သူတို့ နှစ်ယောက်အနားသွားလိုက်ကာ
“စိတ်မရှိပါနဲ့ boss. ကျနော်အလုပ်ကိစ္စလေး ပြောစရာရှိလို့ပါ. ကျနော်တို့ ခေါင်းလျော်ရည် တံဆိပ်ကို နယ်ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ချင်တယ်. အဲ့တော့ နယ်ဘက်ကို marketing ကျနော်ကိုယ်တိုင် ဆင်းချင်းတယ်. နောက်ပြီး အဖော်တယောက်လည်း ခေါ်သွားချင်တယ် boss. အခုမှ အစဆိုတော့ နယ်ဆင်းဖို့ ဝန်ထမ်းအများကြီးမသုံးချင်သေးဘူး. ခေါင်းလျော်ရည်အကြောင်း ဂဃဏန သိမဲ့သူတယောက်လောက်နဲ့ပဲ ဈေးကွက်လိုက်ကြည့်ချင်တယ် ” ဟုဆိုကာ အိဖြူအား တချက်ကြည့်လိုက်သည်. Bossက
“အေး ကောင်းသားပဲကွ. ငါ့ညီက အလုပ်ဝင်တာမကြာသေးဘူး အလုပ်ကြိုးစားနေတာပဲ. ငါ့ဆီမှာ ဒီလိုမန်နေဂျာရှိတာ ဝမ်းသာတယ်ကွာ. ညီလိုအပ်တဲ့ ကားဘာညာ စီစဉ်လိုက်. အဖော်ကတော့ တခြားလူခေါ်မသွားနဲ့ ငါတို့ရဲ့ အလှဘုရင်မလေး အိဖြူကိုသာ ခေါ်သွားကွာ. သူ့ဆံပင်ပြပြီးသာ ကြော်ညာလိုက် အောင်မြင်မှာသေချာတယ်” ဆိုပြီး အိဖြူရဲ့ ဆံပင်တွေကို တခါထပ်ကိုင်မြောက်ကာ ပြောလေသည်. ကျနော်လည်း ဂွင်ထဲဝင်လာပြီ ဖြစ်သဖြင့် ဒေါသစိတ်ကို ထိန်းကာ
“အိဖြူ… ညီမရော လိုက်လို့အဆင်ပြေမလား. ညီမမလိုက်နိုင်လည်း အကိုတခြားတယောက်ခေါ်လိုက်မယ်” ဟုပရိယာရ် သုံးပြီးမေးလိုက်လေသည်.
“ရပါတယ် ဆရာ. Bossကလည်း လိုက်စေချင်နေတာ အိဖြူပဲ လိုက်ခဲ့ပါမယ်” ဟုမဆိုင်းမတွပဲ ပြန်ဖြေသည်. ကျနော်လည်း စိတ်ကူးတွေ အကောင်အထည်ဖော်ရတော့မည် ဖြစ်သောကြောင့် အလွန်ပျော်သွားပြီ
“ဟုတ်ပြီလေ ဒါဆို သန်ဘက်ခါသွားကြတာပေါ့”ဆိုပြီး အိဖြူကိုတချက်ကြည့်လိုက်သည်. သူမကလည်း ခေါင်းလေး ငြိမ့်ပြီး “ဟုတ်ကဲ့. ဆရာအဆင်ပြေသလိုလုပ်ပါ” ဟုဆိုပြီး သူမရဲ့စားပွဲရှိရာဆီ ပြန်လှည့်ထွက်သွားသည်. လှည့်လိုက်တဲ့ အရှိန်ကြောင့် သူမဆံနွယ်တွေလေထဲ ဝဲသွားကာ ရှမ်ပူအနံ့သင်းသင်းလေးက ကျနော့်ကို စွဲဆောင်လိုက်ပြန်သည်. ကျနော်လည်း လီးမတောင်ခင် ရုံးခန်းအတွင်း အမြန်ပြန်လာလိုက်သည်. ထို့နောက် ခုံမှာ ထိုင်လိုက်ပြီး
အိဖြူနဲ့ သွားမဲ့ ခရီးတွင် ဘယ်လိုဂွင်ဆင်ရမလဲ. သူမရဲ့ဆံပင်တွေ ကိုဘယ်လိုကိုင်ဆွဲရင် ကောင်းမလဲ ပြုံးပြုံးကြီး အကြံအစည် ထုတ်နေမိတော့သည်…..
ကျနော်လည်း ပြည်ဘက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနှင့် ကားစီစဉ်ရင်း အကြံအစည်တခုရပြီး စော်ဖီးဆေးမရမကလိုက်ရှာလိုက်သည်. အတုကလည်း များသည်မို့ အသေအချာရှာရသည်. ထို့နောက် အိဖြူကိုတိုက်ရန်စီစဉ်ထားသော ရေသန့်ဘူးထဲသို့ ဆေးထိုးအိပ်အသုံးပြုကာ ထည့်လိုက်ပြီး ကားပေါ်တွင် တင်ထားလိုက်သည်. မနက်ဖန် အိဖြူနှင့် နှစ်ယောက်တည်း စိတ်ကြိုက် စခန်းသွားရမည်ဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ထဲတွင် အလွန်ပျော်ရွှင်နေပြီး အိဖြူဆံပင်ရှည်ကြီးကို မှန်းကာ ဂွင်းတခါတိုက်လိုက်ပြီး အားဆေးတမျိုးသောက်ကာ အိပ်လိုက်လေသည်.
အားဆေးအစွမ်းကြောင့် မနက်အိပ်ယာထကတည်းက လန်းလန်းဆန်းဆန်းနှင့် တတ်ကြွနေတော့သည်.ဒီလိုနဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်နှင့် ခေါင်းလျှော်ရည်နမူနာများကို ကားပေါ်တင်ပြီး ရုံးသို့မောင်းထွက်လာခဲ့သည်.
ရုံးရှေ့ရောက်သည်နှင့် အိတ်တလုံးနဲ့အတူ အိဖြူကိုတွေ့လိုက်ရသည်. ခေါင်းလျှော်ပြီးခါစဖြစ်မည်ထင်တယ် ဆံပင်တွေ အကုန်မခြောက်သေးပဲ နောက်ကျော်တွင်ဖြန့်ချထားသည်. ဒီနေ့မှ အိဖြူက ပိုလှနေတော့သည်. ယခင်ကလို မြန်မာဝတ်စုံဖြင့်မဟုတ်. ကော်လံရှပ်အင်္ကျီအဖြူလေးနှင့် အောက်က စကပ်ဒူးဖုံးအကျပ်လေးဝတ်ထားသည်. အင်္ကျီရဲ့ပါးလျမှုကြောင့် သူမရဲ့ ဘော်လီအညိုလေးကိုပင် ရေးတေးတေးမြင်နေရသည်. အောက်ကလည်း စကပ်အကျပ်ကြောင့် တင်သားလေးတွေလုံးထွက်နေပြီး အလွန်ပင် ဆကျဆီကျနေကာ မြင်သူတကာယောကျာ်းတိုင်းငေးကြည့်နေတော့သည်.
“အိဖြူ ဝရိယတွေကောင်းလှချည်လား. အကိုလည်းစောစောထွက်လာတာပဲ ကားပိတ်နေလို နောက်ကျသွားတာ ဆောရီးကွာ”ဆိုပြီး ကားမှန်ချရင်း ပြောလိုက်လေသည်.
အိဖြူမှ ” ဟုတ် ရပါတယ်ဆရာ. အိဖြူလည်း ခုမှရောက်တာ မကြာသေးပါဘူး. ခေါင်းလျှော်နေတာနဲ့ နောက်ကျနေပြီထင်ပြီး အမြန်ထွက်လာတာ ဆံပင်တွေ ရေတောင်သိပ်မခြောက်ချင်သေးဘူး” ဟု ကျနော့်အားပြုံးပြရင်း ပြန်ပြောသည်. ကျနော်လည်း ကားတံခါးဖွင့်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ ခရီးဆောင်အိတ်ကို ကားနောက်ခန်းထဲပဲ ထည့်လိုက်သည်.
“ကဲ ဒါဆို အကိုတို့သွားကြရအောင်”
“ဟုတ်ကဲ့ ဆရာ” ဆိုပြီး အိဖြူလည်း သူမဆံနွယ်ရှည်တွေကို ရင်ဘတ်ပေါ်ယူလိုက်ရင်း ကားခေါင်းခန်းထဲ ဝင်ထိုင်လိုက်သည်. ကားထဲမှာ လူနှစ်ယောက်တည်းရှိသည့်အပြင် မှန်အလုံပိတ်ထားသောကြောင့် အိဖြူရဲ့ဆံပင်ရှည်တွေမှ ရှန်ပူနံ့သင်းသင်းလေးကို စတင်ခံစားမိတော့သည်. ကျနော်အကြိုက်ဆုံး အနံ့လေး ရှုရှိုက်ရင်း တဖြည်းဖြည်း မောင်းထွက်လာသည်.
ဒီလိုနဲ့ ပြည် မရောက်ခင် မြို့များဖြစ်သည့် လက်ပံတန်း. စစ်ကွင်း. မင်းလှ. အုတ်ဖို. ကြို့ပင်ကောက် စသည့် မြို့များတွင်ဝင်ပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ ခေါင်းလျှော်ရည်အမှတ်တံဆိပ်ကို ကြော်ငြာကြလေသည်. အိဖြူရဲ့ လှပလွန်းတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်တွေကြောင့် ဝင်သမျှဆိုင်တိုင်းက သဘောကျကြသည်. ဆိုင်တော်တော်များများကလည်း အိဖြူရဲ့ဆံပင်ရှည်ကြီးကြည့်ပြီး
” ဟယ် လှလိုက်တာကြည့်ပါအုံး. ဆံပင်ရှည်တာတွေမြင်ဖူးပေးမဲ့ ဒီလိုလှတာမတွေ့ဖူးဘူးဟေ့”်
“တော်တော်လှတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီး ပိုင်ထားတာပဲ ဒီကညီမက”
” ဒီခေါင်းလျှော်ရည် ကြော်ငြာကို ညီမကိုယ်တိုင်ရိုက်ရင် ပိုပေါက်မှာ”
“ဒီလောက် ရှည်အောင် ဘယ်လိုများထိန်းသိမ်းလဲကွယ်”
စသည်ဖြင့် အိဖြူရဲ့ ဆံနွယ်ရှည်များအပေါ် မြင်သူတိုင်းက ချီးကျူးပြောဆိုလေသည်. အိဖြူလည်း သူမရဲ့ဆံနွယ်များကို ဂုဏ်ယူတာတကြောင်း ကြောငြာ၍ကောင်းသည်ကတကြောင်းနှင့် တနေကုန် ပြောလိုက်ဆိုလိုက်နှင့်သာ အချိန်ကုန်နေတော့သည်. ဒီလိုနဲ့ ညနေလည်း စောင်းပြီ ကားပေါ်တွင် ပါလာတဲ့ နမူနာတွေလည်း ကုန်လေပြီ.
“ဆရာ ကျမတို့ ပြန်ကြရအောင် ဒီအချိန်ပြန်ရင် ရန်ကုန်ကို ညမိုးချုပ်တော့ ရောက်မှာပဲ” ဟု အိဖြူက ကျနော့်အားစကားစသည်.
“ကောင်းပြီလေ ပြန်ကြတာပေါ့. ဒါနဲ့ စကားမစပ် ပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး အိဖြူဆံပင်ကတော်တော်လှတာပဲနော်. ဘယ်အချိန်ထဲက ထားတာလဲ”ဟု မေးလိုက်သည်.
“ထားတာကတော့ ၅တန်းလောက်ကပဲဆရာ. အဖေရော အမေရောက ဆံပင်သန်တော့ အိဖြူက ပိုကံကောင်းသွားတာပါ. ပြီးတော့အမြဲထိန်းသိမ်းတယ်လေ” ဟု သူမဆံနွယ်ရှည်တွေကို ပွတ်သပ်ရင်းပြောပြလေသည်.
” awww. ကောင်းပါတယ်. ဒါနဲ့ ညှပ်ပစ်ဖို့တော့ စိတ်ကူးမရှိဘူးမလား. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မညှပ်ပါနဲ့ ညီမရယ်. ညီမလို ဆံပင်ပိုင်ရှင်မျိုး အကိုမတွေ့ဖူးသေးဘူး” ဟု ပြန်ပြောလိုက်သည်.
” အင်း. ညှပ်တော့မညှပ်ပါဘူး. ဒါမဲ့ ဆယ်တန်းကျောင်းသူဘဝတုန်းက တခါတော့ စိတ်တိုပြီး ဂုတ်လောက်က ညှပ်ပစ်ဖို့ လုပ်ပြီး ဆံပင်ညှပ်ဆိုင်သွားလိုက်သေးတယ်. ဟိုရောက်တော့မှ ဆံပင်ညှပ်တဲ့ အမက ညီမလေးဆံပင်က အရမ်းကောင်းတယ် အရမ်းလှတယ် မညှပ်ပါနဲ့ဆိုပြီး ဖျောင်းဖျလို့ မညှပ်ပဲ ပြန်လာတာ”ဟု အံတချက်ကြိတ်ရင်းပြောလေသည်.
” အာ အိဖြူရယ် ဘာကိစ္စ အဲ့လိုစဉ်းစားရတာလဲ. တော်သေးတာပေါ့ မညှပ်ပစ်တာ. အဲ့လောက်ထိ ဒေါသထွက်ရအောင် ဘာအကြောင်းများရှိလို့လဲ. ထပ်ကွန့်ပြီး မေးလိုက်သည်.
“ရှိတာပေါ့ဆရာရဲ့. အဲ့တနှာရူးကောင်ကြောင့် ကျမဆံပင်တွေ ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် အလုပ်ခံရတာ. ပြီးတော့ သူ့ကြောင့်ပဲ ကျောင်းပြောင်းခဲ့ရတာ. ဆံပင်ကိုပဲ အဲ့အကောင်က လုပ်ချင်နေတာ. လောကမှာ ဘယ်လိုလူတွေရှိနေမှန်းကိုမသိပါဘူး ဆရာရယ်” ဟု စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ ပြန်ရှင်းပြလေသည်.
“ဒီလိုပါပဲ. လောကကြီးက ရှုပ်ထွေးတယ်. ကဲကဲ ငါ့ညီမလည်း မောသွားပြီ ရော့ ရေလေးသောက်အုံး” ဟုဆိုပြီး ဖီးဆေးထည့်ထားတဲ့ ရေသန့်ဗူးအားကမ်းပေးလိုက်သည်.
တနေ့ခင်းလုံး ရေမသောက်ရသေးသဖြင့် အိဖြူလည်း ဘူးတဝက်ကျိုးအောင် ဂလုဂလုနဲ့ မော့သောက်လိုက်သည်. ကျနော်လည်း စိတ်လှုပ်ရှားစွာကြည့်နေပြီး ကားဆက်မောင်းလာလိုက်သည်.
တဖြည်းဖြည်း နေဝင်သွားပြီး အမှောင်ရိပ်က သမ်းလာလေပြီ. အိဖြူကို ကြည့်လိုက်တော့ ပေါင်ကြားထဲ လက်လျိုထားကာ ခုံမှာ အသာအယာမှိန်းနေလေသည်. ကျနော်လည်း ဆေးစွမ်းပြပြီသိပြီး
” အိဖြူ တော်တော်ပင်ပန်းသွားတာလား. အိပ်ချင်ရင်အိပ်နော်” ဟု ပြောလိုက်သည်.
” ဟာ ဟုတ်လား ဒါဆို မဖြစ်ဘူးညီမ. အကိုဒီနားက တည်းခိုခန်းတခုခု ရပ်လိုက်မယ်. အိဖြူနားလိုက်အုံး. မနက်မှအေးဆေးပြန်ကြတာပေါ့”
” ရပါတယ်ဆရာရယ်. အိဖြူကြောင့်အလုပ်တွေရှုပ်နေပါ့မယ်”
“မဟုတ်တာ ဆရာလည်း အလုပ်မရှိပါဘူး. အေးဆေးနားပြီးမှ မနက်စောစော ပြန်ကြမယ်”
” ဟုတ် ဆရာ. ဒါဆိုလည်း နားတာပေါ့” အိဖြူဆီမှ သဘောတူညီချက်ရလိုက်လေသည်. ဒါနဲ့ ကားမောင်းလာရင်း တည်းခိုးခန်းတွေ့တော့ဝင်ကြည့်လိုက်သည်. ကျနော်ကလည်း အကြံနဲ့မဟုတ်လား. အိဖြူကိုကားပေါ်တွင်ထားပြီး အထဲခဏဝင်ကာ ပြန်ထွက်လာလိုက်သည်.
“ဒီတည်းခိုခန်းက မလွတ်တော့ဘူး ညီမ.
ဒီလိုနဲ့ ထိုပုံစံအတိုင်း တည်းခိုးခန်း ၃.၄ ခုကို ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ တမျိုးပြီး တမျိုးအကြောင်းပြကာ ကားဆက်မောင်းလာလိုက်သည်. အိဖြူကိုကြည့်တာ အတော်ပင် ဂဏာမငြိမ် တော့ပေ. မရိုးမယွ အခြေအနေဖြစ်နေလေပြီ. ကျနော်လည်းသိလိုက်ပြီး နောက်ဆုံးတည်းခိုခန်းထဲ ဝင်လိုက်ပြီး ဧည့်ကြိုလေးနှင့် ညှိလိုက်လေသည်.
“ဒီလိုငါ့ညီရာ အကိုချစ်သူက အကို့ကိုစိတ်ကောက်နေတယ်. အဲ့တာ တယောက်တခန်းတည်းမယ်လုပ်နေလို့ကွာ. အဲ့တော့ ဒီမှာ တယောက်ခန်းတွေအကုန်ပြည့်နေပြီလို့ပြောပေးကွာ. ၂ယောက်ခန်းတောင်တစ်ခန်းပဲရမယ် လို့လုပ်ပေး ဟုတ်ပြီလား ဒီမှာ ညီ့်အတွက် ဘောက်ဆူး”ဆိုပြီး ၁သောင်းတန်၂ရွက်ကို ကောင်လေးရဲ့ အိတ်ထဲထည့်ပေးလိုက်သည်. ကျနော်လည်း အိဖြူကို သွားခေါ်လိုက်ပြီး Reception ကောင်တာထံ ခေါ်သွားလိုက်သည်.
“တယောက်ခန်း ၂ခန်း မြန်မြန်လုပ်ပေးပါ”ဆိုပြီး အလော တကြီးပြောလေသည်. ဧည့်ကြိုလေးကလည်း ကျနော်ညှိထားသည့်အတိုင်း
“Sorryအစ်မ.. တယောက်ခန်းတွေ ပြည့်နေပြီ. ၂ယောက်ခန်းတောင်တခန်းပဲ ရတော့မယ်ခင်ဗျ” ဟု ပြန်ဖြေလိုက်သည်.
အိဖြူကို ကြည့်ရတာ ခြေထောက်တွေ အတော်ပင် လိမ်နေပြီ.
” အာ့ဆိုလည်း ၂ယောက်ခန်း မြန်မြန်လုပ်ပေး”ဟုဆိုကာ ဧည့်ကြိုကောင်လေးထံမှ သော့အမြန်ယူပြီး သုတ်သုတ် သုတ်သုတ် နဲ့ ရှေ့ကနေသွားတော့သည်.
ကျနော်လည်း ဧည့်ကြိုလေးကို okဆိုပြီး မျက်စိမှိတ်ပြပြီး အိဖြူနောက်မှ လိုက်သွားရန်ပြင်လိုက်သည်.
ဖြောင့်စင်းပျော့အိနေတဲ့ ဆံနွယ်ရှည်ကြီးက လုံးဝန်းတောင့်တင်းနေပြီး နိမ့်ချီမြင့်ချီဖြစ်နေတဲ့ တင်နှစ်လုံးပေါ်မှာ ဘယ်ညာရမ်းနေကာ ကျနော်ရဲ့ စိတ်အာရုံတွေဖမ်းစားနေတော့သည်.
ကျနော်လည်း တံတွေးတွေသာမျိုချနေပြီး နောက်ကနေ သူမရဲ့ ဆံနွယ်အလှတွေကို ငေးပြီး လိုက်သွားတော့လေသည်.
အခန်းတံခါးကိုဖွင့်ပြီးဝင်လိုက်တဲ့အခါ အိဖြူကိုမတွေ့ရ. ရေချိုးခန်းဘက်ကအသံကြားပုံအရ အိမ်သာထဲဝင်နေပုံရတယ်. ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်လည်း ရေခဲသေတ္တာထဲက ကိုကာကိုလာ၂ဗူးထုတ်လိုက်ပြီး အဖုံးဖွင့်လိုက်သည်. ထို့နောက် ဆိုဖာပေါ်ထိုင်လိုက်ပြီး ဒီတခါတော့ ဘောင်းဘီအိတ်ထဲက အိပ်ဆေးဘူးလေး ထုတ်လိုက်ပြီး အိဖြူကိုတိုက်ရန်ပြင်ထားသည့်ဗူးထဲသို့ ၃စက်ချလိုက်သည်. သိပ်မကြာမှီ အိမ်သာထဲမှ အိဖြူ ပေါင်လိမ်ကာ ထွက်လာလေသည်. ကျနော်လည်း အခြေအနေကိုသိပြီး ဖြစ်၍
“အိဖြူ… အဆင်ပြေရဲ့လား ဘယ်လိုနေသေးလဲ. အခန်းကလည်း တစ်ခန်းပဲ ကျန်တော့တာဆိုတော့ အကိုခဏနားပြီး အပြင်ထွက်ပေးမယ်လေ”
“မဟုတ်တာ ရပါတယ် ဆရာရယ်. ဒီမှာပဲနေပါ” ဆိုပြီး အိဖြူရဲ့လေသံက စိတ်ကြွသလိုဖြစ်နေတော့သည်. ကျနော်လည်း
“ကောင်းပါပြီ. ရော့… ခေါင်မူးပြေအောင် အအေးလေးသောက်လိုက်အုံး”ဆိုပြီး ဆေးခပ်ထားတဲ့ ကိုလာဘူးကိုကမ်းပေးလိုက်သည်. အိဖြူလည်း အာခြောက်နေပုံရတယ် တော်တော်သောက်လိုက်ပြီး ကျနော့ဘေးလာထိုင်တယ်. ကျနော်လည်း စကားမရှိစကားရှာပြီး
“တမျိုးတော့မထင်ပါနဲ့ အိဖြူ. ကိုကြားတဲ့သတင်းတွေကမသေချာတော့ အိဖြူကိုယ်တိုင်ပြောတာပဲ ကြားချင်လို့ပါ”
” ဘာများလဲ ဆရာရဲ့”
“အိဖြူက အပျိုလားဟင်. စိတ်မဆိုးနဲ့နော်. ဒီလိုပါ. အိဖြူနဲ့ bossနဲ့က တိတ်တိတ်ပုန်း ညားနေတယ်ဆိုပြီး ရုံးမှာသတင်းတွေကြီးနေတယ်. ပြီးတော့ အိဖြူရဲ့ ဟောဒီဆံနွယ်ကြီးတွေနဲ့ bossကို အပိုင်သိမ်းထားတာတဲ့”
” မဟုတ်တာရှင်. အဲ့bossက တနှာရူး. အလကားနေ ကျမဆံပင်ကိုပဲ ကိုင်ချင်နေတာ. Bossမို့လို့ဘာမှမပြောတာ. ကျမဆံပင်ကို ဘယ်ယောကျာ်းမှ ထိတာ ကြိုက်တာမဟုတ်ဘူး. ကျမလည်း လစာကောင်းလို့သာ သည်းခံနေတာ”ဆိုပြီး ဒေါသလေးထွက်ကာ ပြောပြလေသည်.ကျနော်လည်း အိဖြူစိတ်ကြွနေတာအခွင့်ယူကာ ထပ်ပြီးတော့
်” ဒါဆို အိဖြူက ပါကင်လေးပေါ့နော်. အိဖြူကိုရတဲ့ လူကတော့ ကံကောင်းမှာပဲ”
“အာ ဆရာကလည်း ဘာတွေပြောနေမှန်းမသိဘူး. အိဖြူအိပ်တော့မယ်. ပင်ပန်းနေလို့” ဆိုပြီး ငြူစူပြီး မတ်တပ်ရပ်ကာ သူမဆံနွယ်ရှည်ကြီးကို နောက်ကို အသာအယာလွဲပို့ပြီး အိပ်ယာထက်ဆီ ထွက်သွားတော့သည်. လွဲလိုက်တဲ့ အရှိန်ကြောင့် ဆံနွယ်တွေက သင်းရနံ့က ကျနော်စိတ်တွေ စွဲဆောင်ကာ အောက်လီးကလည်း တောင်လာတော့သည်. အိပ်ယာနားရောက်သည်နှင့် အိဖြူလည်း သူမဆံနွယ်ရှည်ကြီးကို မွေ့ယာထက်ပစ်တင်လိုက်ပြီး ဝမ်းလျားမှောက်ကာ ပစ်လှဲချလိုက်တော့သည်. ကျနော်လည်း ရေခဲသေတ္တာထဲက ဝီစကီပုလင်းယူပြီး တပတ်ကိုရေခဲတတုံး စိမ်ကာ မော့ချလိုက်ပြီး ရဲဆေးတင်လိုက်သည်. ထို့နောက် အင်္ကျီ ရော ဘောင်းဘီရော ချွတ်လိုက်ပြီး ခုံပေါ်တင်ထားဖုန်းကို ယူလိုက်သည်. ထို့နောက် ဗီဒယို ရိုက်ရန် အိဖြူအိပ်ပျော်နေတဲ့ဘက်ချိန်လိုက်လေသည်. အညိုရင့်ရောင် ပျော့ပျောင်းလွန်းတဲ့ ဆံနွယ်တွေက အိပ်ယာထက်မှာ ကတ္တပါပိုးသားကဲ့သို့ လှပစွာပြန့်ကျဲနေတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကျနော်လည်းလီးလည်း အသားကုန်တဆက်ဆက်ဖြင့်တောင်နေတော့သည်. ကျောင်းသားဘဝတုန်းက မနမ်းရှုက်ခဲ့ရတဲ့ ဆံပင်တွေ အဖျားကနေ အရင်းထိအောင် တဝကြီး နမ်းရှုပ်ပစ်လိုက်သည်. အခုအသေအချာကိုင်ကြည့်မိသောအခါ ယခင်ကျောင်းသားဘဝကိုင်ခဲ့ဖူးတော့ ဆံနွယ်များထက် ပိုမိုနူးညံ့ပျော့ပျောင်းနေလေပြီ. ဆံပင်ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်ပဲ ဒီလောက်တော့ရှိမှာပေါ့ဟု စိတ်ထဲ၌တွေးလိုက်ပြီး ဂုတ်ပိုးနားက ဆံပင်တွေကိုစုကာ အရင်းမှ အဖျားထိ တစုတည်းဖြစ်အောင်စုလိုက်ပြီး ကျနော့်လီးတွင် အထပ်ထပ် ပတ်လိုက်သည်. အိဖြူရဲ့သန်စွမ်းလွန်းတဲ့ ဆံပင်တွေကြောင့် ကျနော်လီးပင် ဆံပင်များကြားထဲ၌ ပျောက်ချင်းမလှပျောက်နေတော့သည်. အိဖြူဆံပင်တွေကို ကျနော်စိတ်ကြိုက်လုပ်နေသော်လည်း သူမ မနိုးပေ. ဆံပင်တွေရဲ့အထိအတွေ့ကြောင့် လီးထိပ်မှာ အရည်ကြည်များအတော် စို့နေတော့သည်. ကျနော်လည်း ပတ်ထားတဲ့ ဆံထုံးကြီးကိုကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ရင်း အိဖြူရဲ့ဆံနွယ်တွေအထိအတွေ့ကိုကောင်းကောင်းကြီး ခံစားမိနေသည်. စော်ပေါင်းများစွာရဲ့ ဆံပင်နဲ့လိုးဖူးသော်လည်း အိဖြူရဲ့ဆံပင်လောက်ခံစားမှု မပြင်းထန်ပေ.
၁၅မိနစ်လောက်ကြာအောင် လိုးပြီးနောက် ပြီးချင်သလိုဖြစ်လာ၍ အိဖြူဆံပင်တွေကိုထပ်ဆွဲရန် အစီအစဉ်ရှိသဖြင့် ဆံပင်တွေကြားထဲက လီးကိုထုတ်လိုက်ပြီး အိပ်ယာခင်းပေါ် သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်မိသည်. ခဏအမောဖြေပြီး အိဖြူကို ပက်လက်လှန်လိုက်ပြီး လှုပ်နှိုးကြည့်သည်. ဆေးအရှိန်ကြောင့် အတော်မင်မောဟိုက်ပြီး အိပ်နေလေပြီ. ကျနော်လည်း အချိန်မဆိုင်းပဲ အိဖြူရဲ့ အင်္ကျီ ကြယ်သီးများကိုဖြုတ်ပစ်လိုက်သည်. ထို့နောက် စကပ်ချိတ်လေးကိုဖြုတ်ပြီး အသာအယာပင်ဆွဲ ချွတ်လိုက်သည်. အိဖြူဘယ်လောက်တောင်ထန်ထားလည်းမသိ. အတွင်းခံမှာအင် အရည်များရွဲနေတော့သည်. အရည်တွေစိုနေတဲ့ အတွင်းခံပါ ချွတ်ပစ်လိုက်သည်. အိဖြူရဲ့ အဖုတ်လေးက အမွှေးတွေရိတ်ထားသဖြင့် ရှင်းနေပြီး တခြားစော်တွေလို မဲညစ်ညစ်ဖြစ်မနေပဲ ခပ်ဖွေးဖွေးလေးဖြစ်ကာ ဖောင်းမို့နေပြီး ထိရက်ကိုင်စရာမရှိအောင်ပင် တင်းရင်းနေသည်. အပေါ်ပိုင်းကိုပြန်တတ်လိုက်ပြီး အိဖြူကိုဆွဲမလိုက်ကာ ကျောဘက်မှာရှိတဲ့ ဘောလီချိတ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ ဝင်းမွတ်နေတဲ့ ရွှေရင်အစုံကို အသာအယာပင် ပွတ်ချေပေးလိုက်သည်. အိဖြူပါးစပ်မှ
” အင်း….” ဆိုပြီး အသံထွက်လာလေသည်. အသံပြုသော်လည်း လူကမနိုးပေ. ငယ်ငယ်တည်းကြွေခဲ့ရသော် လှပလွန်းတဲ့ ဆံပင်ရှည်ကြီးနှင့်ကောင်မလေးမှာ ယခု မိမိရှေ့တွင် မိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်း ကိုယ်တုံးလုံးတီးနှင့် အိပ်ပျော်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကျနော်ရဲ့ လီးလည်း တဖန် ပြန်တောင်လာတော့သည်. အိဖြူရဲ့ ဆံပင်တွေကိုပြန်ဖြန့်ခင်းလိုက်ပြီး ဖုန်းကိုယူကာ စိတ်ကြိုက်ပုံများရိုက်ထားလိုက်သည်. ထို့နောက် ဗီဒယို ရိုက်ရန်ပြင်လိုက်ပြီး အိဖြူရဲ့ ပေါင်ကြားနေရာကို ကျနော့်ကိုယ်လုံးဖြင့် နေရာယူလိုက်လိုက်သည်. အိဖြူရဲ့ ပေါင်တံလေးနှစ်ချောင်းကိုအသာဖြဲလိုက်ကာ အရည်တွေစိုနေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးပေါ်သို့ ကျနော့်ရဲ့ လီးကြီးကို တေ့ပြီး အဖုတ်လေးဖြဲကာ မလိုးသေးပဲ စောက်စေ့လေးကိုလီးဖြင့် အထက်အောက်ပွတ်ဆွဲပေးလိုက်သည်. အိဖြူတကိုယ်လုံး တုန်တတ်သွားပြီး လန့်နိုးသွားကာ သူမအဖုတ်အား လီးဖြင့်ထောက်ထားသော ကျနော့်အား ပြူးကြောင်ကြည့်နေတော့သည်. ကျနော်လည်း အချိန်မဆွဲတော့ပဲ အဖုတ်ထဲသို့ လီးကိုတောင်ပြီး ထိုးထည့်ချလိုက်သောအခါ အိဖြူအော်တော့လေသည်.
“အား… နာတယ်…. ရှင်..ရှင်…. ဘာလုပ်နေတာလဲ. ကျမကိုမယုတ်မာနဲ့….အား….အခု ပြန်ထုတ်…အား…. မလုပ်ပါနဲ့…” ဟု ရုန်းထရင်း ကျနော့်အားအော်တော့သည်. အိဖြူရဲ့ အော်သံကြောင့် ပိုပြီးဖီးဖြစ်ကာ လီးကိုအဆုံးထိထိုးထည့်လိုက်ကာ အပျိုမှေးကို ထောက်မိလိုက်တော်သည်. အပျိုမှေးထိမိသဖြင့် အိဖြူအတော်နာကျင်သွားပြီး အသံပျောက်သွားကာ မျက်ရည်များစို့လာတော့သည်. ကျနော်လည်း ကျန်လက်တဖက်ဖြင့် အိဖြူရဲ့ လုံးဝန်းနေတဲ့ နို့လေးတွေကို အကြမ်းမတမ်း နှိပ်နှယ်ပြီး ပန်းနုရောင် နို့သီးခေါင်းလေးကို ပွတ်ချေပေးလိုက်ကာ အောက်ကနေ လီးကို အပြင်ကိုအသာအယာပြန်ထုတ်လိုက်ပြီး နောက်တကြိမ်အားယူကာ တဆုံး ဆောင့်ချလိုက်ပြီး အပျိုမှေးလေးကို ထိုးဖောက်ခွဲချလိုက်တော့သည်. အားဘယ်လောက်ပါသည်မသိပေ ကျနော်လီးထိပ်ပင် ကျင်တတ်သွားတော့သည်. အိဖြူလည်း ဘာမှမအော်နိုင်တော့ပဲ မျက်ရည်များသာ ထွက်လာတော့သည်.
ဖီးဆေးအရှိန်ကြောင့် အိဖြူအဖုတ်အတွင်းက အရည်များ ပြည့်လျှံလာပြီး အဝင်အထွက် အတော်ပင်ကောင်းလာတော့သည်. ကျနော်လည်း ပုံစံတမျိုးပြောင်းရန် ကြံလိုက်ပြီး အိဖြူရဲ့ ဖင်လုံးကြီးနှစ်လုံးဆွဲမပြီး သူမအပေါ်သို့အုပ်မိုးလိုက်သည်. ထို့နောက် မျက်စိစုံမှိတ်ထားသော အိဖြူမျက်နှာနှင့် ကျနော်မျက်နှာအပ်လိုက်ပြီး သူမရဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို အသာအယာစုပ်နမ်းပေးလိုက်တယ်. ကြည့်ရတာ အိဖြူလည်း တဖန်ပြန်ပြီးဖီးလာနေပုံရသည်. ကျနော်နှင့်အလိုက်သင့် ပြန်လည်စုပ်နမ်းနေရင်း မျက်စိလေးဖွင့်ကြည့်သည်. ကျနော်လည်း အားမလျော့ပဲ အိဖြူအဖုတ်ထဲ လီးကို အသားကုန်ထိုးမွှေပြီးလိုးပေးနေမိသည်. အိဖြူဖီးတွေတတ်လာပြီး ကျနော်ရဲ့ ကျောကုန်းကို သူမလက်တွေကုပ်ဖက်ကာ ပါးစပ်မှလည်း
” အင်း….အင်း….အင်….အား…..အားးး” ငြီးငြူးတော့သည်. နာရီ ဝက်လောက် ထိုပုံစံအတိုင်း အထုတ်အသွင်းမှန်မှန်လုပ်ရင်း ပြီးချင်လာတော့သည်.
“အိဖြူ…. ကိုပြီးတော့မယ်. အထဲပဲ ပန်းထုတ်လိုက်မယ်နော်” ဟု ပြောလိုက်သောအခါ အိဖြူလည်း ခေါင်းလေးပြန်ညိမ့်ပြသည်. ဒါနဲ့ပဲ အိဖြူပေါင်လေးနှစ်ချောင်းကို မိုးပေါ်ထောင်လိုက်ပြီး ၂ချက် ၃ချက်ဆောင့်ထည့်လိုက်ကာ ဆန့်ငင်ဆန့်ငင့် နှင့် အဖုတ်ထဲသို့ ကျနော့်ရဲ့ ခပ်နွေးနွေး သုတ်ရည်တွေ ပန်းထည့်လိုက်တော့သည်. လီးအားချက်ချင်းဆွဲမထုတ်နိုင်သေးပဲ အိဖြူရဲ့ ခေါင်းအရင်းနားက ဆံပင်တွေပေါ် မျက်နှာအပ်ပြီး ပစ်လှဲချကာ ဆံနွယ်တွေကို နမ်းရင် အမောဖြေနေလိုက်သည်…..
အမောလည်းအနည်းငယ် ပြေသွားပြီး လီးလည်းပျော့သွားပြီဖြစ်သဖြင့် အိဖြူကိုယ်ပေါ်မှ ဆင်းလိုက်လိုက်လေသည်. အိဖြူလည်း ဆေးအစွမ်းကြောင့် ကာမသုခအစွန်းစွန် ခံစားပြီး မောဟိုက်နေပုံရသည်. ကျနော်လည်း ဆေးထပ်မတိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီး သူမကိုဆွဲထူလိုက်သည်. အိဖြူကိုခေါင်းစခြေဆုံးကြည့်လိုက်ပြီး
“အိဖြူ နင်ကအရင်ကထက်အများကြီး ပိုလှလာတာပဲနော်. နင့်ဆံပင်လည်း အရှည်ကြီးဖြစ်လာတာပဲ. အရမ်းလှတယ်ဟာ” ဆိုပြီး သူမဆံနွယ်ရှည်တွေယူပြီး နမ်းရှုံလိုက်လေသည်. ကျနော်အား အံသြသောမျက်လုံးတွေနဲ့ အိဖြူကြည့်နေတော့သည်. ထို့နောက်
“နင်… နင်…ငါမှတ်မိပြီ… နင် ကိုလင်း မလား… ငါအစကတော့ ထင်တော့ထင်တယ်. ဒါမဲ့ ငါ့သေချာမသိလို့ မပြောခဲ့တာ နင်တော်တော် ယုတ်မာတဲ့ကောင်ပဲ လူယုတ်မာ ကဲ…ဟာ…” ပြောနေရင်း ကျနော့်အား ပါးလှမ်းရိုက်လေသည်. ကျနော်လည်း အိဖြူရဲ့ လက်သံကိုသိပြီး ဖြစ်၍ အချိန်မှီ သူမရဲ့ လက်ကိုဖမ်းတားလိုက်ပြီး
” ဟုတ်တယ် ငါ ကိုလင်းပဲ. နင်စောက်ချိုးက အရင်က အတိုင်းပဲ. အာ့ကြောင့်ခုနက နင့်ကိုအသေလိုးပေးထားတာ နင်မမှတ်သေးဘူးပဲ. နင့်ကိုငါဘာပြောခဲ့လဲ မှတ်မိလား.. ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် နင့်ကိုရအောင်ယူပြလို့ ငါပြောထားတယ်လေ အခုနင့်ကို ရပြီ ဟား..ဟားးး…ဟားးး” ရယ်မောကာ ပြောလိုက်လေသည်.
” လူယုတ်မာ နင့်ကိုတိုင်မယ် ငါ့ကိုအလိုမတူပဲ အဓမ္မကျင့်တာ. နင်ယုတ်မာ ငါကိုမရစေရဘူး. ဒီဆံပင်တွေလည်း မပိုင်စေရဘူး အကုန်ညှပ်ပစ်မှာ စိတ်ချ” ဟု ဒေါသမျက်ဝန်းတွေ ကျနော့်အား စေ့စေ့ကြည့်ရင်း ပြန်ပြောသည်.
ကျနော်လည်း ဆံပင်ညှပ်မယ်ပြောသဖြင့် ဒေါသထွက်ပြီး
” နင်ဒီလောက်ခံထားရ မမှတ်သေးဘူးလား. လာစမ်း…” ဆိုပြီး အိဖြူဆံပင်ကို အရင်းနားမှာ ဆွဲလိုက်ပြီး ကုတင်အစွန်းကိုဆွဲခေါ်လာလိုက်သည်. ထို့နောက်ကုတင်အောက်ဆင်းလိုက်ပြီး
“ဟဲ့ လေးဘက်ထောက်စမ်း” အမိန့်ပေးလိုက်သည်. ဆံပင်ဆွဲခံထားရသဖြင့် နာသွားသည်ထင်၏ ကျနော်ပြောသည့်အတိုင်း အိဖြူလိုက်လုပ်ပေးသည်. ထို့နောက်
” နင့်အဲ့ဆံပင်ကိုပတ်လိုက် ပြီးရင် ငါ့လီးကို နင့်ပါးစပ်နဲ့ စုပ်ပေးစမ်း” ထပ်ပြီးအမိန့်ပေးလိုက်အခါ အိဖြူခေါင်းမော့ကြည်ပြီး
“နင်မမိုက်ရိုင်းနဲ့ ငါအဲ့လိုညစ်ညစ်ပတ်ပတ် မလုပ်နိုင်ဘူး…..အ…..”သူမစကားမဆုံးမှီ ပါးပိတ်ရိုက်လိုက်မိသည်.
” ငါကလုပ်ဆိုလုပ်လေ စောက်စကားတွေများလိုက်တာဟာ”ဟု ဟိန်းဟောက်လိုက်တဲ့အခါ အိဖြူ ငိုပြီး ခိုင်းတဲ့အတိုင်း သူမဆံနွယ်တွေနဲ့ ကျနော့်လီးကိုပတ်လိုက်ကာ ထိပ်ဖျားလေးသာပေါ်နေတဲ့ လီးကို နှုတ်ခမ်းဖျားလေးနဲ့ စုပ်ပေးလေသည်. အိဖြူရဲ့ ခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ၁၀မိနစ်လောက်ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ် လုပ်ပေးလိုက်သည်. ထို့နောက် တဆင့်တတ်ပြီး အိဖြူပါးစပ်ထဲမှ လီးကိုထုတ်လိုက်ပြီး
“ဖင်ကုန်းထားပြီး ဟိုဘက်လှည့် . လှည့်ပြီးရင် နင့်ဆံပင်တွေ ငါ့ကိုအကုန်ပေး”ဆိုပြီး အိဖြူရဲ့ တင်သားလုံးလုံးကြီးတွေ လက်နဲ့ “ဖြန်းးး” ခနဲမြည်အောင်ရိုက်လိုက်ပြီး အမိန့်ပေးလိုက်သည်. ခြေသလုံးလောက်ထိရှည်တဲ့ဆံပင်တွေမို့ ကျောပေါ်ကနေဖြန့်ခင်းလိုက်ရာ ဖြူဝင်းနေတဲ့ ဖင်လုံးလုံးကြီးပေါ်မှ အိပ်ယာခင်းပေါ်ထိ ပြန့်ကျနေတော့သည်. ရစ်ပတ်ပြီး လိုးထားတာတောင် အခုချိန်ထိ ပျော့အိဖြောင့်စင်းနေတဲ့ အညိုရင့်ရောင် ဆံနွယ်ရှည်တွေက ဖင်လုံးလုံးကြီးနှစ်ခုကြားက ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးပေါ် ဖုံးအုပ်နေတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့် ကျနော့်ရဲ့ လီးလည်း ပြန်တောင်လာတော့သည်. အဖုတ်နေရာက ဆံပင်တွေခွဲထုတ်လိုက်ပြီး အဖုတ်လေးကို လီးဖြင့်တေ့လိုက်တဲ့အခါ အိဖြူကိုယ်လုံးလေး တွန့်သွားပြီး အဖုတ်မှလည်း အရည်ကြည်များ ပြန်စို့လာတော့သည်. ကျနော်လည်း အခြေအနေသိလိုက်ပြီး အိဖြူရဲ့ ခါးသေးသေးလေးကို ကိုင်ကာ တင်းကျပ်နေတဲ့ အဖုတ်လေးထဲသို့ လီးအား ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်းပေးလိုက်သည်. အပျိုလေးဖြစ်သည့်အပြင် လေးဘက်ထောက်ပြီး ပေါင်စေ့ထားသဖြင့် အဖုတ်လေးက ပိုမိုတင်းကျပ်နေတော့သည်. ကျနော့်လီးက သုတ်ရည်စတွေကြောင့်ရော အိဖြူအဖုတ်ထဲက အရည်ကြည်လေးကြောင့်ရော အဝင်အထွက် ချောမွေ့လာတော့သည်. ခါးကိုကိုင်ထားတဲ့ လက်ကိုလွှတ်လိုက်ပြီး အိဖြူရဲ့ ဆံနွယ်ရှည်တွေ အကုန်လုံးကို တစုတည်းဖြစ်အောင်စုလိုက်ပြီး လက်တွင်ပတ်ကာ ခေါင်းလေးမော့အောင့် ဆွဲလိုးနေမိတော့သည်. ၁၅မိနသ်ခန့် လိုးပြီးသော် ဆံပင်တွေကို နှစ်ခြမ်းခွဲလိုက်ကာ မြင်းစီးရန် ကြံလိုက်သည်. ထို့နောက်လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ခုနကထက် ပိုမိုအားထည့်ကာ ဆွဲလိုက်ကာ အိဖြူ ကိုယ်လုံးလေးပါ ကော့ပြီးပါလာတော့သည်. ကျနော်လည်းဆံပင်တွေကိုဆွဲ အိဖြူရဲ့နားနားကပ်ကာ
” ဘယ်လိုလဲ ခံလို့ကောင်းလား. ဒါက ငါ့ကိုအရင်တုန်းက ပါးရိုက်ခဲ့တဲ့အတွက် လက်စားချေတာ မှတ်ထား. ငါဆိုတဲ့ကောင်က မရရအောင် ယူတတ်တယ်. မှတ်ပြီလား မှတ်ပြီလား” ဆိုပြီး ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးနေရင်း မိနစ်၃၀ ကျော်လောက်ကျတော့ အိဖြူရဲ့ အဖုတ်ထဲကို သုတ်ရည်ပန်းထုတ်ကာ သူမရဲ့ ဆံပင်တွေကို လက်က လွှတ်ပေးလိုက်တော့သည်. အိဖြူလည်း ကျနော့်ရဲ့ လိုးချက်တွေက ကာမစည်းစိမ် အတော်အတန်ခံစားလိုက်ရပြီး မောဟိုက်ကာ လေးဘက်ထောက်ရာမှ ဝမ်းလျားမှောက်ကျသွားတော့သည်. အိဖြူရဲ့ဘေးမှာ ကျနော်လည်း လှဲချလိုက်ပြီး အမောဖြေရင်း ခဏမှေးနေမိလိုက်သည်. သိပ်မကြာခင် အိဖြူထလာပြီး အိပ်ယာပေါ်တွင် သူမရဲ့ ဒူးလေးနှစ်ချောင်းကိုဖက်ကာ ဆံနွယ်တွေဖုံးအုပ်ရင်း အံကြိတ်ကာ တရှိုက်ရှိုက်ငိုနေတော့သည်. ငိုသံကြောင့်
” ဖုန်းထုတ်ပြပြီး ဒီမှာတွေ့လား. နင့်ပုံတွေ ဒီမှာ နင်နဲ့ ငါနဲ့ လိုးထားတဲ့ ဗီဒယို ဒီမှာ နင့်ဆံပင်ကို လိုးထားတာ မြင်လား. နင်တိုင်တာ တောတာ၊ နင်ဆံပင်ညှပ်ပစ်တာ လုပ်ရင် ဒါတွေအကုန်လုံး ရုံးမှာရော နင့်အမျိုးတွေဆီပါ ပို့ပစ်မယ်. ပြီးတော့ ဒီမှာ လိုးတဲ့အချိန် နင်ရုန်းကန်ထားတာမရှိဘူး. အဲ့တော့ အလိုတူအလိုပါပဲ. ဒီတော့ အခုမှတော့မထူးဘူး လုပ်စရာတခုပဲရှိတယ် နင်ငါ့ကိုယူလိုက်တော့ ငါလည်းနင့်ကို ကျောင်းတည်းက ကြိတ်ကြွေခဲ့ရတာ. မင်းကိုလည်းငါချစ်တယ်”
“နင့်ပါးစပ်က ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားမထွက်နဲ့. နင်တကယ်ချစ်ရင် ဒီလိုမလုပ်ဘူး. ပြီးတော့နင်ချစ်တာ ငါ့ဆံပင်ကို ငါ့ကိုမဟုတ်ဘူး.. ငါသိတယ်”
“မဟုတ်ပါဘူးဟာ ငါ့မှာရွေးချယ်စရာမရှိလို့လုပ်တာ. နင့်ဆံပင်ကိုချစ်တာမှန်တယ်. နင့်ကိုလည်း ချစ်တာပဲလေ. ငါတကယ်ပြောတာပါဟာ . နင့်ကို မယားမှတ်မှတ် သားမှတ်မှတ်ပေါင်းပါမယ်. ငါကတိပေးပါတယ်နော်” ဟု ဆိုကာ အိဖြူရဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကို ရင်ခွင်ထဲ ဆွဲထည့်ကာ ဦးခေါင်းထိပ်က ဆံနွယ်အရင်းလေးကို အနမ်းပေးလိုက်သည်. ထို့နောက် မေးစေ့လေးကနေ ခေါင်းကိုဆွဲမော့လိုက်ပြီး အိဖြူရဲ့ မျက်လုံးကို စေ့စေ့ကြည့်ပြီး
“ကို မင်းကိုအရမ်းချစ်တယ်”ဟုပြောပြီး နှုတ်ခမ်းလေးကို အနမ်းတွေထပ်ပေးလိုက်ကာ လက်တဖက်လည်း သူက နို့လုံးလုံးလေးကို အသာအယာနှိပ်နယ်ပေးရင် အိပ်ယာပေါ်ကိုဆွဲလှဲလိုက်သည်. နို့လေးတွေကို နယ်နေရင်း လက်ကိုအောက်ထပ်ဆင်းကာ အဖုတ်လေးကို ပေါင်ကြားထဲက သူမရဲ့ဆံပင်လေးတွေနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်သည်. အိဖြူလည်း
” အ.. ယားတယ် ကို… ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး”
“ယားတာမဟုတ်ပါဘူး အိရယ် ဆံနွယ်လေးတွေက နူးညံ့လွန်းတဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် ကောင်းလာတာပါ. ကို ဘာကြောင့် အိရဲ့ဆံနွယ်တွေကိုစွဲလမ်းလည်း အခုသိရလိမ့်မယ်” ဟုဆိုပြီး ဆံပင်တွေထပ်ယူကာ အိဖြူရဲ့ အစိလေးပေါ် တမျှင်ချင်းဆီ ပွတ်ပေးလိုက်ရာ အိဖြူ ကိုယ်လုံးလေး သိမ့်သိမ့်တုန်ကာ အဖုတ်မှလည်း အရည်ကြည်များ စီးကျလာပြီး ကိုယ်လုံးလေးပါကော့ကော့တတ်လာတော့သည် . ၁မိနစ်လောက်လုပ်ပေးပြီးနောက် ဒီတခါတော့ အိဖြူကို မတ်တပ်ရပ်ခိုင်းလိုက်လိုက်သည်. ကျနော်က အိဖြူနဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင် ရပ်လိုက်ပြီး ရှေ့ဘက်တွင်ဝဲကျနေတဲ့ အိဖြူရဲ့ဆံပင်ရှည်တွေကို ကျောဘက်အကုန်ပို့လိုက်ကာ ခြေထောက်တဖက် ဆွဲမြှောက်လိုက်ပြီး အဖုတ်ဝကို ကျနော့်လီးဖြင့်တေ့လိုက်သည်. ထို့နောက် ကိုယ်လုံးလေးကိုအသာအယာဆွဲယူလိုက်ပြီးလီးကိုအဖုတ်ထဲ ထိုးထည့်ပေးလိုက်သည်. အိဖြူအတော်ပင်ဖီးလာနေပြီ. ကျနော်လည်း အချိန်မဆိုင်းပဲ နောက်ခြေထောက်တဖက်ကို လက်ဖြင့် ပင့်မြှောက်လိုက်ပြီး အိဖြူအား မတ်တပ်ရပ်လျက် ချီကာ ခုန်လိုးနေမိသည်. သူမကပျော့ပျောင်းလှပလွန်းတဲ့ ဆံနွယ်အညိုရင့်ရောင်တွေက နောက်ကျောတွင် တလိပ်လိပ်နှင့် လှိုင်းများသဖွယ်ဖြစ်နေတော့သည်. ချီလိုး၍ညောင်းလာသဖြင့် အိဖြူကို တဖက်သို့လှည့်ခိုင်းလိုက်သည်. ထို့နောက် အိဖြူရဲ့ ဖင်အိုးလုံးလုံးကြီးကို လီးဖြင့်ထောက်ကာ သူမရဲ့နောက်ကျောက ဆံပင်တွေ တဝကြီးနမ်းပစ်လိုက်ကာ နှစ်ခြမ်းခွဲပြီး ရှေ့သို့ပို့လိုက်သည်. လက်ကို အိဖြူရဲ့ ဂျိုင်းအောက်က လျိုပြီး ဆံပင်တွေနှင့် နို့တွေကို ပွတ်ပေးလိုက်သောအခါ အိဖြူ ထပ်ပြီး ဖီးတတ်လေတော့သည်. ဖင်မှာထောက်ထားတဲ့ လီးကို အဖုတ်ဝကိုတေ့ပြီး ဆောင့်လိုးပေးနေမိတော့သည်. ဒီတခါတော့ ၄၅မိနစ်လောက်ကြာမည်ထင်တယ်. အတော်လိုးလို့ကောင်းသည်. ဦးခေါင်းအနောက်ဘက် ဆံပင်အရင်းကို နမ်းရသည့် အရသာမှာလည်း ထူးခြားလွန်းလှသည်. ကျနော်လည်းလိုးနေရင်းပြီးချင်လာ၍ လီးကို အဖုတ်ထဲကထုတ်လိုက်ပြီး အိဖြူကို ဒူးထောက် ထိုင်ခိုင်းလိုက်ကာ ဦးရေးပြားထိပ်လီးတင်ပြီး သုတ်ရည်တွေ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်. သုတ်ရည်တွေအတော်ပင်များသည် အိဖြူငယ်ထိပ်မှ စ၍ နားထင်၊ပါးပြင် နဖူးပေါ်ထိ စီးကျ ကုန်တော့သည်. ကျနော်လည်း အိဖြူရဲ့ ဦးခေါင်းပေါ်က သုတ်ရည်တွေကို သူမဆံပင်တွေ ထပ်ယူပြီး လုံးကာ သုတ်လိုက်လေသည်. ပြီးတော့ လူလည်း တော်တော် မော်ဟိုက်သွားပြီး အိပ်ယာပေါ်ခြေပစ် လက်ပစ် ပစ်လှဲချလိုက်တော့သည်. အိဖြူလည်း ကျနော့်ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ လာအိပ်ရင်း
“ကို… အရမ်းချစ်တယ်နော်. အိဖြူ ဆံပင်တွေတော့ ပြန်ခေါင်းလျှော်ပေး ရမယ်နော် ဒါပဲ. နောက်လည်း ကိုလုပ်ချင်ရင်လုပ် ပြီးရင်တော့ ပြန်လျှော်ပေးရမယ်နော်” ဟု ကျနော့်အား နှုတ်ခမ်းလေးဆူကာပြောလေသည်. ကျနော်လည်း
” လျှော်ပေးရမှာပေါ့ အိရဲ့. အိလည်း ကို့စိတ်ကြိုက်လုပ်ပေးရမယ် ဟုတ်ပြီလား. စိတ်ချ အိ ဆံပင်တွေအမြဲလျှော်ပေးမယ်”ဟု ပြောပြီး သူမရဲ့ဆူနေတဲ့ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို အနမ်းချွေးရင်း အိပ်လိုက်တော့သည်……….